Ukhenketho lwefektri -Shenzhen Spocket Technology Co., Ltd.
I-SPOCKET yenye yeefektri ezikuluhlu oluphezulu ezinezixhobo zemveliso ezihambele phambili, ubuchwephesha obuphambili kunye nokusebenza kwabasebenzi abanamava ngokuthembekileyo kwiimarike zasemakhaya nezangaphandle. Inendawo yokuvelisa yeemitha zesikwere engama-2000 yemiboniso kunye nokukhuselwa kwemisila iyonke. Bonke oomatshini bakumgangatho olungileyo, kunye nomgangatho othunyelwe kwelinye ilizwe.
Sixhasa iinkonzo ze-OEM / ODM!
Sinikezela wonke umthengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ze-OEM kunye nee-ODM kunye neenkonzo zokuhlangabezana neemfuno zakho.
• Nikezela ngenkonzo ye-OEM
• Nikezela ngeNkonzo yokuYila
• Nikezela ngelebheli yomthengi
• Ukunikezela ngokupakisha komthengi
Sinamaqela ama-4 eR & D aneenjineli ezinamava ezili-10.
Nalu uthotho lweemveliso ezinje nge: POS / tablet PC / mobile holder holder, anti-steal dispaly stand, adjustable device display, anti-theft pull box, plastic coiled lanyard, steel wire lanyard, safety cord lanyard, security cable lock, sewing iirholithi ezinokuhlengahlengiswa, ibheji reel, ithegi yesinyithi, ii-hardwares zentambo.
Sineemodeli ezininzi zeemveliso zokhuseleko ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Ezinye zeemveliso zethu ziye zavuzwa ngokuqatshelwa okuphezulu kunye neendumiso ezivela kubathengi ekhaya nakumazwe aphesheya emva kokungena kwintengiso.